युगसम्बाद साप्ताहिक - राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ?
Monday, 01.20.2020, 11:18pm (GMT+5.5) Home Contact
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ?
Wednesday, 03.04.2015, 12:10pm (GMT+5.5)
सबै नीतिहरूलाई सही बाटोमा हिंडाउने र सबै नीतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नीति राजनीति हो । राजनीतिमा बिकार घुस्यो भने सबै नीतिहरू भताभुंग हुन्छ । समाज चल्न चाहिने अनुशासन भत्कन पुग्छ अनि समाजमा विकृति, विसंगति र बेथितिको थुप्रो लाग्छ । नेपाली समाजमा अहिले त्यस्तै कुराहरूको पहाड खडा छ । राजनीतिले आफ्नो काम गरिरहेको छैन । राज्य चलाउनेहरूमा कुनै सोच र संस्कार देखिएको छैन । त्यसैले नेपाली जनता हरक्षण त्रासमा बाँच्न विवश छन् । बलात्कार, लुटपाट, अपहरण, हत्या जस्ता कुरा समान्य लाग्न थालेका छन् । युवा पुस्तामा अपराध मनोवृत्ति बढ्दो छ । यसको अर्को कारण जिम्मेवारी लिएकाहरूबाट एकले अर्कोको मुख ताक्नु पनि हो ।
राजनीतिले केही गरेन भनेर राज्य संचालनका बाँकी सबै अंग चुप लागेर बस्दाको परिणाम पनि हो आजको दूरावस्था । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्य संचालनका लागि चार क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण अंग मानिन्छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संचार माध्यम । तर यहाँ कसबाट कति आश गर्ने ठाउँ रहन्छ र रहेको छ भन्ने नै खुट्याउन सकिन्न । राजनीति गलत दिशामा गए पनि अन्य अंगले सही मार्ग पक्डनु पर्ने हो र गलत दिशा हिंड्ने राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउनुपर्ने हो । तर, सबै राजनीतिको पछि कुद्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूको दौराको फेर समातेर आफ्नो उन्नतिको भर्याङ खडा गर्न चाहनेहरूको हालिमुहाली भएका कारण नेपाल र नेपाली जनताको अवस्था दुर्दान्त छ ।
भनिन्छ, संविधान नबनेर समस्या भयो । संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भएन । तर किन भएन ? कसैले पनि आआफ्नो आत्मा छाम्ने प्रयास गरेका छैनन् । जनतालाई सहमतिको बाधक फलानो र ढिस्कानो भनेर मात्र हुँदैन । आफूले कस्तो व्यवहार र कर्म गरिरहेको छु भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । संविधानसभा वहिस्कार गरेर आन्दोलनमा जाने तर तलब–सुविधा अग्रिम लिने । लाभदायी मानिने संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागवण्डा गर्न सहमत हुने तर, मुलुकको विकास र संविधानमा सहमति जुटाउन नसक्ने । खान कुरा मिल्ने ठाउँमा मिल्ने तर संविधान बनाउन नमिल्ने यो कस्तो राजनीतिक संस्कार हो ? नेताहरूको यस्तै गलत प्रवृत्तिले ग्रस्त राजनीतिलाई संक्रमणकाल भन्ने गरिन्छ ।
के संक्रमणकालमा जसले जे गर्दा पनि हुने हो ? संक्रमण भन्दैमा मुलुकको विकास ठप हुनुपर्ने हो ? पक्कै हैन । यहाँ सोच, संस्कार र प्रवृत्ति नै केही गरौं भन्ने नभएपछि संक्रमणलाई दोष दिए पुग्ने । संक्रमणबाट गुज्रेका अन्य मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था र नेपालको अवस्था तुलनै गर्न नसकिने छ । लामो समय द्वन्द्वबाट गुज्रिएका, लाखौंलाख मानिसले ज्यान गुमाएका मुलुकहरू एक दशककै बीचमा आर्थिक विकास गरी सबैको आँखाको नानी बन्न सफल भैरहेको छन् । तर नेपालमा संक्रमणलाई दोष दिएर जिम्मेवारी लिएकाहरू सजिलै उम्कने गरेका छन् । नेपालको संक्रमण राजनीतिक दलका केही नेताहरूको अहंकार र स्वार्थ मात्र हो । मुलुक संक्रमित भएको नेताहरूकै व्यवहारबाट मात्र हो । यहाँको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत साधन संक्रमित छैनन् । काम गर्नेलाई कुनै अबरोध छैन । तर यहाँ काम गर्नसक्ने योग्यता र क्षमता भएका नेतै निस्किएनन् । जनताको भावना तिरस्कृत भैरहेको छ ।
राजनीति भनेको सत्ता मात्र हैन, अनि राजनीति भनेको नेताहरू सुरक्षाकर्मी अघिपछि लगाएर भाषण छाट्नु मात्र पनि हैन । राजनीति जनस्तरसम्म पुग्न सकेन भने त्यस्तो राजनीतिको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिले नेपालको राजनीति जनस्तरसम्म पुग्नै सकेको छैन । सिंहदरबार र बालुवाटारकै वरिपरी मात्र फन्को लगाइरहेको राजनीतिले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको पीडा बुझ्न सकेको छैन । भाषणमा विकासका लम्बेतान योजना सुनाउनसक्ने नेताहरू त्यही भाषण कार्यान्वयन गर्न पटक्कै सक्दैनन् । सबैले भन्ने गरेका छन्– संविधान बनेपछि मुलुकका सबै समस्या समाधान हुन्छ । योभन्दा लज्जास्पद अर्को कुनै कुरै छैन । गाउँको धारामा पानी आउन संविधानले रोक्दैन । संविधानले किसानको खेतमा मल–बीउ पुर्याउन पनि रोक्दैन अनि विकास खर्च गर्न पनि रोक्दैन । सुविधा लिन, नियुक्ति गर्न, आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्न संविधान बाधक नहुने तर मुलुक सपार्ने कामका लागि भने संविधान नबनेर बाधा उत्पन्न भयो भन्नु जत्तिको गैरजिम्मेवारीपन अरु केही हैन । मुलुक यस्तै गैरजिम्मेवारहरूको भीडमा रुल्मुलिएको छ ।